शिवपुजन रायले चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने ? फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालत, प्रचण्डले भने चिन्ता नलिनुस् – Medianp
शिवपुजन रायले चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने ? फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालत, प्रचण्डले भने चिन्ता नलिनुस्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, मङि्सर २०, २०७४०४:११
काठमाडौं, २० मंसिर । सर्लाही ४ का माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवले निर्वाचन लड्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आज सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्दैछ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशमा रायकाे पेशी तोकिएकाे छ ।
कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरेको आरोपमा रायलाई विशेष अदालतले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र कैदको सजाय सुनाएको थियो । निर्वाचन ऐनमा कुनै पनि उम्मेदवारको चरित्र नैतिक पतन भएको नदेखिएको, सार्वजनिक मुद्दामा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले रायको उम्मेदवार खारेज गरेको थियो ।
मंगलबार रायको मुद्दामा भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी खारेजबारे निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले भन्दै बुधबारका लागि बोलाएको छ । सोही आधारमा आज आयोग र अदालतबीच रायको उम्मेदवारी खारेज गर्ने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा छलफल भई अन्तिम फैसला आउने भएको छ ।
आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएलगत्तै ६ दिनअघि राय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए । सर्लाही एमालेका केही कार्यकर्तासहित आफ्नो निवासमा आएका रायलगायतलाई प्रचण्डले कुनै चिन्ता नगर्न र चुनावको प्रचार प्रसारमा लागिराख्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘तपाईले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन, म सबै कुरा मिलाउँला, निर्वाचन प्रचार प्रसारमा लागिराख्नुस् तपाईको उम्मेदवार खारेज हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । प्रचण्डको सो आश्वासनपछि राय सर्लाही ४ मा चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डकै दबाबमा सर्वोच्चले आजै रायको उम्मेदवारी खारेजबारे अन्तिम फैसला सुनाउन लागेको हो ।
माओवादी केन्द्र र एमालेका नेता कार्यकर्ता रायको उम्मेदवारी खारेज नहुनेमा विश्वस्त छन् । रायको उम्मेदवारी बचाउन एमाले र माओवादी केन्द्र नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई निकै ठूलो दबाब दिएको बताइएको छ । ‘शिवपुजन रायको उम्मेदवारी कायमै रहने छ भन्ने बेहोराको सर्वोच्च अदालतको फैसला आएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ,’ स्रोतले मिडिया एनपीसँग भन्यो । सर्लाही ४ मा कांग्रेसबाट अमरेशकुमार सिंह, वाम गठबन्धनबाट राय र राजपाबाट राकेश मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् ।
पैसा बाँड्न जाँदा कांग्रेसको आक्रमणमा परे राजेन्द्र महतो
शीतकालीन ओलिम्पिक्समा रुसमाथि प्रतिबन्ध
दशैंको टिकाका दिन निशुल्क बस सेवा संचालन गर्दै सेना, कुन रूटमा चल्छन् बस ?